Mkpokọta Mgbakọ Social CRM na Uto | Martech Zone
Social CRM bụ otu n'ime okwu ndị ahụ na-emebiga ihe ókè na mgbagwoju anya. O yiri ka ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ụdị mmekọrịta ha amalitela ịkekọrịta ngwa ha na mpaghara Social CRM. N'uche nke m, enwere ọtụtụ njirimara nke ikpo okwu mmekọrịta ga-enwerịrị tupu ọ kpọọ onwe ya Social CRM:
Monitoring - ikike iji nyochaa mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma melite ọkwa.
Identification - ikike ijide njirimara nke profaịlụ mmekọrịta mmadụ na ịnakọta ozi gafee profaịlụ mmekọrịta mmadụ ma tinye ya na ndekọ nke mmadụ, yana nhazi nke ma ha bụ onye ndu ma ọ bụ onye ahịa.
Azụmahịa - ikike ị gafere ụzọ mmekọrịta mmadụ na ibe ya, kenye ọrụ, ma hụ na emezuru mkpebi ahụ.
Campaigns - ikike iji aka ha na -emepụta itinye aka na mkpọsa iji mee ka nsogbu na nnweta.
akuko - ikike ịmepụta mkpokọta nchịkọta akụkọ na ntanetị ọhaneze na CRM iji hụ na enwetaghachila nkwụghachi azụ.
Avectra Social CRM odi ka enwere ihe nile di nkpa ma biputa ihe omuma a Kedu otu Social CRM na-esi eme mmanụ na-eto eto.
Tags: njikọ akaibuelekọta mmadụ mataelekọta mmadụ mkpọsaelekọta mmadụ crmihe ntinye mmaduuto ndi mmadunjirimara mmadụmgbasa ozi mgbasa ozinlekota oruAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe yaarụ ọrụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Nov 30, 2012 na 1:17 AM
Nnukwu ozi Mr. Karr! Enwere m ike ikwenye na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nwere ike inwe ezigbo mmetụta na ụlọ ọrụ ahụ. Akwa post!